Qalabka wax lagu duubo ee rogrogmi kara, badiyaa waxay leeyihiin saddex, shan, toddobo, sagaal lakab oo filim ah. Waa maxay farqiga u dhexeeya lakabyada kala duwan ee filimada? Warqadani waxay diiradda saaraysaa falanqaynta, tixraacaaga. Isbarbardhigga 5 lakab iyo 3 lakab Lakabka caqabadda ee qaab dhismeedka shanta ayaa badiyaa ku jira c ...
Faakiyuumka faakiyuumku waa mid ka mid ah mashiinnada jikada ee aadan fahmin inta aad isticmaali doontid - illaa aad mid ka iibsatid. Waxaan u adeegsannaa shaanbadeyda faaruqinta ah keydinta cuntada, dhalooyinka lagu xiro iyo dhalooyinka, ilaalinta daxalka, dib-u-hagaajinta bacaha iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa faakiumkaaga faakiyuumka 'sous vide cooki ...
Cilmi baaris cilmiyaysan oo ku saabsan soo saarista, tayada iyo codsiyada suurtagalka ah ee filimada la cuni karo / la nabaad guuri karo ee soo saarista cuntada waxaa sameeyay kooxo cilmi baaris badan oo adduunka oo dhan ah waxaana lagu soo warramey daabacaadda cilmi baarista5-9. Awoodda ganacsi iyo deegaan ee weyn ee ...